မဲခေါင်အစည်းအဝေး (၄) ခုသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် တက်ရောက် – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
မဲခေါင်အစည်းအဝေး (၄) ခုသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် တက်ရောက်
(၃-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ ဗန်ကောက်မြို့)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့ Convention Center ၌ ကျင်းပသည့် (၁၂) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်မြစ်အောက်ပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် (Lower Mekong Initiative-LMI) ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးသို့လည်းကောင်း၊ (၁၀) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး (10th Mekong-Ganga Cooperation Foreign Ministers’ Meeting) သို့လည်းကောင်း၊ (၉) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ကိုးရီးယားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး (9th Mekong-ROK Foreign Ministers’ Meeting) သို့ လည်းကောင်း၊ (၁၂) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂျပန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး (12th Mekong-Japan Foreign Ministers’ Meeting) သို့ လည်းကောင်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
(၁-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့၊ ၁၄:၄၅ မှ ၁၅:၄၅ နာရီအချိန်ထိ ကျင်းပသည့် (၁၂) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်မြစ်အောက်ပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် ဝန်ကြီးများအဆင့်အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (၆) နိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Michael Pompeo နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Don Pramudwinai တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေး၌ LMI ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့် အနာဂတ်အစီအစဉ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး LMI (၁၀) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ပူးတွဲကြေညာချက်နှင့် မဲခေါင်မြစ်အောက်ပိုင်း မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (Friends of Lower Mekong-FLM) အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ပူးတွဲကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ (၁၀) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် LMI ၏ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် ထူးချွန်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ (၃) ဦးအား အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Michael Pompeo မှ ဂုဏ်ပြုဆုပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆုချီမြှင့်ခြင်းခံရသူများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုက်ဘာစီတီး) မှ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအောင်ဝင်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် သင်္ချာပညာရေးစနစ် (STEM Education) စီမံကိန်းတွင် ထူးချွန်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက် ဆုရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(၁-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့၊ ၁၇:၁၅ မှ ၁၈:၁၅ နာရီအချိန်ထိ ကျင်းပသည့် (၁၀) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၌ ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Pham Binh Minh နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Dr.S. Jaishankar တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့် အနာဂတ်အစီအစဉ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပူးတွဲကြေညာချက်နှင့် Mekong-Ganga Plan of Action (2019-2022) တို့ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(၃-၈-၂၀၁၉) ရက်၊ ၀၉:၀၀ မှ ၁၀:၁၅ နာရီအချိန်ထိ ကျင်းပသည့် (၉) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ကိုးရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတွင် ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ကိုးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Ms. Kang Kyung-wha နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Don Pramudwinai တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် Mekong-ROK Plan of Action (2017-2020) နှင့် မဲခေါင်-ကိုးရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရန်ပုံငွေ (Mekong-Korea Cooperation Fund- MKCF) တို့ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းများ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် အနာဂတ်အစီအစဉ်များအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စများအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ပထမအကြိမ် ကျင်းပမည့် မဲခေါင်-ကိုးရီးယား ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကာ ပူးတွဲသဘာပတိကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(၃-၈-၂၀၁၉) ရက်၊ ၁၀:၃၀ မှ ၁၁:၃၀ နာရီအချိန်ထိ ကျင်းပသည့် (၁၂) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂျပန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Taro Kono နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Don Pramudwinai တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် Tokyo Strategy 2018 အရ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းများ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၊ အနာဂတ်အစီအစဉ်များ၊ Mekong-Japan Initiative for SDGs toward 2030 ရေးဆွဲမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပြင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စများအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပူးတွဲသဘာပတိ ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။